Diyaarado joog hoose ku duulaya oo saakay lagu arkay Muqdisho iyo | raascasayrmedia.com
← Waraysi Maxamuud Aadan Dubad ( Warbixin SSC)(Dhagayso)
Ethiopia oo soo Fara Gelisay Khilaafkii Ahlu-Suna Ka Dhex Jiray (Faahfaahinta Shir ka Dhacay Addis Ababa) →
May 21, 2011 · 2:05 pm
Diyaarado joog hoose ku duulaya oo saakay lagu arkay Muqdisho iyo
Diyaarado helicopter ah oo joog hoose ku socda ayaa saakay lagu arkay xaafado ka mid ah magaalada Muqdisho, iyadoo dhinaca kalana iska horimaad uu ka dhacay degmooyinka Hodon iyo Wardhiigley.
Diyaaradahaani oo dhowr xabo ahaa ayaa waxaa la sheegay in ay ka soo dul kaceen markab taagan badda, waxaana iyagoo joog hoose ku duulaya saakay lagu arkay xaafado ka mid ah degmooyinka Wadajir iyo Waaberi ee gobolka Banaadir.
Inkastoo diyaaraduhu aysan waxyeelo geysan hadana waxa ay abuureen hadal heyn badan oo dadka dhexdooda ah iyadoo aan la garaneyn ujeedooyinka diyaaradahaasi iyo sidoo kale dalalka laga leeyahay.
Diyaaradaha helicopter-ka ah ayaa sidoo kale shalay waxaa lagu arkay xaafado ka mid ah degmooyinka Huriwaa iyo Yaaqshiid halkaasi oo ah xarumaha ugu waaweyn ee Al Shabaab ay ku leeyihiin Magaalada Muqdisho, waxaana rasaas lidka diyaaradaha ku riday sida la sheegay dagaalyahano ka tirsan Al Shabaab inkastoo aysan waxba u dhimin.
Dhinaca kale saakay ayaa xaafado ka mid ah degmooyinka Hodon iyo Wardhiigley ee gobolka Banaadir waxaa ka dhacay iska horimaad joos goos ah kaasi oo geystay qasaare dhaawacyo ah.
Xaafadaha iska horimaadku uu dhacay ayaa waxaa ka mid ah Siigaale iyo Geed-jaceel waxaana inta la ogyahay ku dhaawacmay sedax ruux oo rayid ah kuwaasi oo la tilmaamay in rasaas habow ah ay guryahooda ugu tagtay.